AMISOM oo qiratay dilka dad rayid ahaa – Radio Baidoa
AMISOM oo qiratay dilka dad rayid ahaa
By Webmaster	 On Jun 10, 2020
Hawl-galka Midowga Africa ee Soomaaliya ayaa qirtay in 3 ruux oo rayida dileen halka 2 kalena ay dhaawaceen kadiba weerar gaadmo oo Al-Shabaab ku soo qaadeen ciidankooda oo maraya marin muhiim ah oo dhaca woqooyi bari magaalada Janaale ee Gobalka Shabeellaha Hoose.
Sida ay AMISOM ku sheegtay bayaan, weerarkan ayaa dhacay June 8, 2020, waxaan ku dhintay 3 haween ah halka 2 kalena ay ku dhaawacmeen, waxana ay AMISOM xustay in ay aad uga xuntahay arrintaaasi nasiib darada ah.
“Dhacdadii maalintii Isniinta 8-da bishan waxa ay ahayd nasiib daro, waan uga tacsiyeynaynaa ehelada marxuumiintaasi, kuwa dhaawaca ahna caafimaad deg deg ah ayaa u rajeynaynaa”, Madaxa AMISOM, Francisco Modera ayaa sidaa yiri.
Ciidamada AMISOM ayaa horay waxaa ay dilal kala duwan ka geysteen deegaano iyo degmooyinka ay ka howlgallaan xilliyada ay weerarada tooska ah iyo qaraxyada ay kala kulmaan Al-Shabaab.
Puntland oo xir xirtay dad dhigayay banaanbax lagu taageerayay Dowladda
Laamaha Amniga Galmudug Odayaal ku xir xiray Gobolka Galgaduud